मणिग्राम - विकिपिडिया
मणिग्राम तिलोत्तमा नगरपालिका भित्र पर्ने एक नयाँ बस्ती हो । यसको स्थापना राममणि आ.दी.ले गरेका हुन् । वि.सं. २००७ साल अघि भैरहवा र बुटवलको बीचमा बाक्लो जंगल थियो । यस जंगललाई रखौना बिर्ता वा कुमारीको जंगल भनिन्थ्यो । चन्द्रशमशेर नेपालका प्रधान मन्त्री भएको समयमा सरदार राममणि आ.दी.लाई केही जंगल पुरस्कारको रुपमा प्रदान गरिएको थियो । चन्द्रशम्शेरको विश्वासपात्र भएकोले पछिका राणा शासकले उनीमाथि विश्वास गरेनन् र पुरस्कार दिएको जमीन फिर्ता लिए । धेरै समय पछि जुद्ध शम्शेरको समयमा बसोबास र कृषि उत्पादनका उद्देश्यका साथ राममणिलाई त्यो जग्गा फिर्ता दिइयो ।
१ माझखण्डमा वनफंडानी (नवकट्टी)
२ वर्तमान प्लट अवस्थिति
माझखण्डमा वनफंडानी (नवकट्टी)[सम्पादन गर्ने]
राममणिले वनफंडानीका लागि भारतबाट एक जना रेंजरको नियुक्ति गरे । जसले वि.सं. १९९७ मा वनलाई १२ वटा प्लटमा सीमांकन गरेर प्रत्येक प्लटमा जाने सडक निर्माण गरे । त्यस पछि रुखहरूको वैज्ञानिक गणनाको काम सुरु गर्यो । प्रत्येक प्लटमा कति र कुन प्रकारका रुखहरू थिए सो गणना गरी वन कटानी सुरु भयो । त्यसैले यस स्थानको नाम नौकट्टी (नवकट्टी– नया कटान) हुन गयो । खस्यौली र भैरहवाको बीचमा पर्ने भएकोले यसको एउटा नाम माझखण्ड पनि थियो । बस्ती बसाल्ने प्रेरणा मणि खलकले गराएको हुनाले मणिग्राम भन्ने नाम अनौपचारिक रुपमा प्रचलित हुन थाल्यो । त्यस बस्तीको मुख्य उद्देश्य वनफंडानी गर्नु थियो । जो मानिस काम गर्न त्यहां आएर बसे तिनीहरूलाई करिया भनिन्थ्यो । तिनीहरू बसेको बस्तीको नाम पछि करहिया हुन गयो ।
वर्तमान प्लट अवस्थिति[सम्पादन गर्ने]
हालको नौकट्टीको वर्तमान गाविस अवस्थिति यस प्रकार छ
तालिका. प्लट नम्बर, जंगलको नाम र गाविस अवस्थिति
प्लट नं.	वनको नाम	अवस्थिति
१ रामवन	आनन्दवन
२ कैलाशवन	आनन्दवन
३ नन्दनवन	आनन्दवन
४ शान्तिवन	करहिया
५	शान्तिवन	करहिया
६	नन्दनवन	करहिया
७	कैलाशवन	आनन्दवन
८	रामवन	आनन्दवन
९ आनन्दवन	आनन्दवन
११ मधुवन आनन्दवन
वि.सं. २००७ को दशकमा बसाईं सरी आएका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङजा जिल्लाका आन्तरिक प्रवासीहरूको यहाँ बहुमत छ । जातजातिमा बाहुन, क्षत्री, मगर, दलित, नेवार, थारु, अहिर, मुस्लिम आदि विभिन्न जातजाति बसोबास गर्दछन् । कुनै नयाँ बस्तीको आर्थिक विकासमा नव आगन्तुकहरूको विशेष योगदान हुने समाजशास्त्रीय सिद्धान्त छ । यस क्षेत्रमा त्यही भएको हो । तिनाउ पानीको उपयोगको सम्बन्धमा थारू बासिन्दाहरूले सुरु गरेको परम्परालाई पहाडी बासिन्दाहरूले अझ परिमार्जन गर्दै संस्थागत बनाए । उनीहरूले यसलाई समुदायको सम्पत्तिको रुपमा विकसित गर्ने प्रविधिहरू विकास गरे । वि.सं.२०३० को दशकमा बसाईं सराई अझ तीव्र भयो र पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरू मणिग्राम र यस वरपरका क्षेत्रमा बसाईं सरे । सामान्यतः भैरहवा र बुटवलको मध्यको क्षेत्रफल भन्नासाथ मानिसहरूले सामान्यतः बुझ्ने क्षेत्र नै मणिग्राम हो । पहाडी भेगबाट बसाईं सरेका मेहनती कृषकहरूले तिनाउको पानीका साथै उर्वर भूमिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने प्रविधिहरू विकसित गर्दै लगे । सिंचाई प्रणालीलाई जनसहभागितामूलक बनाउने, नियम कानुन निर्माण गर्ने विधिहरू वैज्ञानिक र सर्वमान्य हुँदै गए । पानीको उचित वितरणले उत्पादनमा वृद्धि भए पछि रुपन्देही धान उत्पादनमा चर्चित हुन गयो । पशुपालनको विकास पछि यो जिल्ला पशुपालनमा पनि उत्कृष्ट ठहरिएको छ । रुपन्देही जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र विशेष गरेर शंकरनगर, आनन्दवन, करहिया, मक्रहर, गंगौलिया, टिकुलिगढ गा.वि.स.हरू विकसित क्षेत्र मानिन्छ । आज यो क्षेत्र नै भोषित तिनपा हो । यस भित्र तिलोत्तमा नदी अर्थात तिनाउ नदीको पानीले विकसित बनेका गाउ“हरु तथा तिनीहरूको सम्बन्धित गाविसको नाम यस प्रकार छ
तालिका २ः गाउँ मौजा र गाविस अवस्थिति इतिहास
नन्द नगर टिकुलीगढ
कुमारी सिर	मक्रहर
कुमारी असामी	मक्रहर
ज्योतिनगर उत्तर टोल	करैया
ज्योतिनगर दक्षिण टोल	करैया
चार नम्बर	करैया
तीन नम्बर	करैया
दुइ नम्बर आनन्दवन
पूर्व पहुनी	आनन्दवन
पश्चिम पहुनी	आनन्दवन
सालघारी भलदोदरी	आनन्दवन
आनन्दवन मधुवन	आनन्दवन
माथिल्लो डिंगरनगर शंकरनगर
पच्चीस बिघा डिंगरनगर शंकरनगर
एघार बिघा पन्ध्र बिघा	शंकरनगर
नयां जानकीनगर शंकरनगर
चीनीयां मोहोडा	शंकरनगर
शंकरनगर पूर्व शंकरनगर
शंकरनगर एक नं.	शंकरनगर
शंकरनगर नयां मोहोडा	शंकरनगर
शारदा मोहोडा	शंकरनगर
लालबहादुर मोहोडा	शंकरनगर
मुख्य गाउं भित्र पुराना र ऐतिहासिक टोलहरु पनि छन् । यी सबै इतिहास, परम्परा, संस्कृति यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था भित्रको ठूलो सम्पत्ति हो ।
मणिग्राम र यस वपिरिका क्षेत्र मिलाएर वि.सं. २०७१ मा एक नगरपालिका निर्माण भएको छ जसलाई तिलोत्तमा नगरपालिका नामकरण गरिएको छ ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=मणिग्राम&oldid=731999" बाट निकालिएको
महोत्तरी जिल्लाका ठाउँहरू
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०८:०८, २९ मे २०१९ मा परिवर्तन गरिएको थियो।